Masangano evechidiki anorira alarm pamusoro pehasha nekuti 'hanya' ndiko kushungurudzwa chaiko. : Martin Vrijland
Masangano evechidiki anorira alarm pamusoro pehasha nekuti 'hanya' ndiko kushungurudzwa chaiko.
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa4 November 2019	• 11 Comments
Minister Sander Dekker (munoziva avo vatongi, vaigona kuona munhu wese semukwasha akakodzera, asianogona kunge ari mhumhi mune chipfeko chemakwai) anodaro kuvhunduka nekuda kwekukura kwezviitiko mukutarisira kwevechidiki. Zvakanaka, Sander, pamwe imhaka yekuti George Orwell akatotsanangurira chimwe chinhu mubhuku rake 1984 mutauro mutsva ndizvo. Mubhuku iro rinotsanangurwa kuti mazwi akadai se 'kutarisirwa' anogona kunge achireva kushungurudzwa uye zvimwe zveyaityisa. Ini ndatozviona izvo necamera yangu yakavanzika inorekodha mune ye "kuchengetwa kwevechidiki" mamiriro mu2013 (ona vhidhiyo pazasi). Iye director weiyo institution muHeerhugowaard akadzingwa nechikonzero nekuda kweizvi marekodhi nemirairo yakagadziridzwa zvishoma, asi zvechokwadi yaive yakanangidzirwa kuchengetedza scout kunze kwemukova zvakanyatsojeka mune ramangwana.
Vhidhiyo iyoyo inopa imwe nzwisiso mukuvhunduka kwenzvimbo dzakadaro. Ini ndakaita kurekodha iyi apo mwanasikana weshamwari yangu akaguma mune chimwe chinhu chakadai. Nekuti aive nefivha, takabvumirwa zvisingaite uye ini ndaigona kufema nekamera yakavanzika. Nhare mbozha-yakapinda, iyo yandaiviga mukaravhe yemubhedha wake, akakwanisa kunyora zvine ruzha zvekushungurudza muvakidzani wake (nevashandi vepo). Iwe uchanzwa izvozvo pakupera kwevhidhiyo. Muchikamu chekutanga chevhidhiyo anoshuma mabudiro aaifanira kuita zviitiko zvese zvaaiita kunze kwemusuwo. Kutya kwakachena kwevechidiki vasina kana chakakomba pane notch yavo, asi ingova nenguva yakaoma yekuyaruka kana mamiriro epamba. Uye zvechokwadi izvi zvaingova zvekungopfupisa nepepa rechidzitiro. Nhau dzandakaudzwa kwandiri nevaimbove vagari vemo (chete) sangano iri rinongori kunze kwenyika ino! Kutya kwakachena uye hapana anozviona! Minda yemuchadenga nezvivakwa zvakanaka, asi mukati munegehena pasi pano.
Munguva yakapfuura iwe waibvumidzwa kuve uri wechidiki achiri kuyaruka; mazuva ano wakakiiwa muchitokisi chega. Kana vabereki vako vakakuvharira kumba, ivo vanozogamuchira zita rekurwara-kurapwa; kana mushandi wekuchengetedza vechidiki akakupa "kurwadziwa kukurudzira" (verenga: rova ​​rimwe nerimwe) kana mafiraira muchitokisi chakazvimiririra, izvo zvinodzidzisa uye "zvinodiwa". Izvi zvinongoerekana zvakanaka here? Takapedzisira kupiko !?
Hana dzevashandi vanochengeta vechidiki idzi dzinoita kunge dzakabirwa pamubhadharo weti kana imba uye Nike yazvino yezvizvarwa zvavo. Zvinoita sekunge zvakawandisa kuti muripo wenguva dzose asi muripo unogumisa hana. Iko hana yeavhareji yevashandi vekuchengeta vechidiki angangosangana neiyo pfungwa ye 'befehl ist befehl'. Iye zvino iwe unogona kuwana iyo yekuita yekumhanyisa uye kunyatsogutsikana kuti kune zvakare vanhu vazhinji vane moyo wechokwadi nekuda kwenyaya iyi. Tine urombo, asi hazvingadaro pasina nekuti kune mhirizhonga yakanyanya pamusoro pevashandi vekuchengeta vechidiki. Ini ndagamuchira dzakawanda (kupora: ndinoreva zvakawandisa) zvichemo zvekuchengeta kwevechidiki. Zvakawanda kutaura! Mukuremekedza ikoko, ndaifanira kukanda demo kupa zvese zvichemo izvi nehanya. Ingori yakawandisa uye inoshushikana zvakanyanya kunetseka!
Mune maonero angu, kutarisira kwevechidiki haisi kunetsekana. Isu tiri kupupurira zvinotyisa kudzidzisa-makambi uko vanhu vese vanofuratirwa. Zvakanaka kwete, hatisi kuzvipupurira, nekuti hatizvione. Zvinoitika mukunyepa; shure kwemasuo akapfigwa neminda yakanaka. Kuvhara vechidiki vanoyera vane imba yavo inogona kunge isiri kufamba zvakanaka uye kutonga inonzi "kurwadzisa kukurudzira," kusanganisira kuvhara mumasokisi ekuzviparadzanisa nevamwe, kwakangoipisisa kupfuura reMedhia. Ipapo mushumiri akadaro aine girazi rake rakachena uye magirazi akasarudzika uye sutu anogona kuti "ashamiswa", asi kwandiri izvo hazvisi chinhu kunze kwehumhi mune chipfeko chemakwai chinoti 'beh'. Icho chengetedzo yevechidiki izere wedunhu remasangano anowana mari yakawanda kubva ku "masevhisi" uye kupombi mari kutenderera kumisana kwe vasina mhosva vanotambura vana. Yazova indasitiri yechokwadi!
Ini ndingati: Iwe Sander Dekker unopedza zuva uri muchitokisi chakanaka (nekuti hapasisina nzvimbo nePIN kodhi rakavharwa mune "institution" yakadaro "kune vechidiki" hanya "Institute. Iva neruoko rwakanaka kana mutsipa mutsipa wekutarisa kukanda muchitokisi wakasarudzika kuti utonhore (verenga: wakaneta uye wakazara usinganetsi wakarara pasi). Ipapo isu tinoda kukuona zvakare mune yako sutu yakanaka ne tie. Ona kana uchine chats.
Unogona kuzvibvunza kuti: Zvinoshamisa here kuti chisimba chakawandisa kune vechidiki "chengetedzo" chinomuka kana zvinoshamisa kuti vashandi ava vanoita sevakarasikirwa nehana zvakanyanya nekuwedzera? Chii chiri kunetsa neNetherlands, iyo nyika umo munhu wese anoita seanobata maoko mumwe nemumwe kubvumidza kusazvibata uye kukwidziridza kusagadzikana kune zvakajairika? Ndiani ane guts kuti awanezve hana uye apedze zvinotyisa zvakadaro? Ndiani oh ndiani? (Onawo vhidhiyo mumashoko)
Source chinyorwa listings: nu.nl
Chikumbiro: Chimhosva chekuongorora kwepfungwa Mark Rutte naSander Dekker munyaya ya Anne Faber
Kaurai vana venyu uye imi moga muwane makore 2 sekumazwi aJasmine M nhasi
Nhamba yepamusoro yevanhu vakavhiringidzika inokonzera-chinetso chinetso?
Vanhu vanowedzera vari kushanda kune hurumende, kuitira kuti kutsoropodza kwehurumende kunopera
Tags: nunura, Dekker, Featured, Heerhugowaard, masangano evechidiki, kuchengeta vechidiki, mushumiri, njodzi bhero, Sander, hutano hwehutano
Goverana share share !!
PLEASE ONA: Facebook ichavhara meseji iyi pane nguva yevanhu nekuti vanoiwana "isingakoshi" (verenga nyika censorship), saka zvakare govana nevo tsamba, WhatsApp kana zvakadaro!
Chinhu chinonyanya kunetsa ndechekuti vanhu vazhinji vasina hanya nekutya kugovera zvinyorwa ... nekutya kuti vamwe vanozovaseka pane kuti vazoziva kuti ivo vanyadzi vega vanonyara.
Tinoona nguva zhinji nzira idzo dzinonzi dzichipokana nekusaruramisira ivo pachavo vanoita zvakasarudzika kusarongeka kukuru. MaAllies angadai akadzinga maNazi, asi kuombesa Dresden pabeche raWinston Churchill kana hondo yapera. VaNazi vanouraya vanhu pasina, asi ivo "vaponesi" vakaita saizvozvo. Zvakanakisa kunze kwemubvunzo wekuti ndiani chaizvo akatsigira Adolf Hitler mari (yakanga isiri mari yeZionist ichiuya kubva kuUS?): Naziism yakamborega kuvapo here? Kana kuti kutsakatika kwaAdolf Hitler kubva pachiitiko chaive kutanga kwekuvakwazve kwefcism mune jekete idzva rinotaridzika rezvematongerwo enyika?
Sezvineiwo nerunyararo tichine mifananidzo .. ndozvazvakaita mushure mehondo (ona befehl ist befehl shots yeaakabatana "saviors").
Misasa yekudzidzira-yeSoviet haichazivikanwe se gulag nhasi uye misasa yevasungwa yeNazi haisisina chimiro chakadai. Mazuva ano chinodaidzwa kuti GGZ kiriniki kana inzvimbo yekuchengetedza vechidiki. Isu tava kuwanda uye nekuisa zvese mune yakanaka Orwellian nyowani-yekutaura jira, kuti pasave neanotambudzwa nehana. Suo repamberi rakacheneswa uye gadheni rakatsveneswa uye gonhi resero rine yakanaka kushongedzwa uye pini lokiyi.
Huwandu hwerufu hwaive pamutemo 25 zviuru, asi izvo zvakavakirwa pane iyo Churchill pfungwa ye "Nhoroondo yakanyorwa nemukundi"
Muchokwadi, tiri kutaura nezvemazana ezviuru kusvika kumiriyoni kufa mushure mebhomba iri. Nekudaro, ndeyechokwadi zvakare zvakare kuti ndiNeo-maNazi anoshevedza nhamba dzakadai. Iye anokunda anonyora zvekare zvinyorwa zvebhuku renhoroondo (uye zvechokwadi zvinobuda zvakachena).
Chaive chimwe chiitiko chikuru chemafungu mahombe emvura yekuputika yeposphorous ichiteverwa nemoto mukuru wakadzima zvese zvaive zviri zvipenyu. Ongorora: iyo hondo yakanga yatove yapera!
Nei ndichiisa zviri pamusoro?
Kuratidza kuti isu tirikurarama pasi pekutonga zvisiri izvo; hutongi hunosunga vanhu nekuvaisa mumisasa. Misasa iyoyo inongotaridzika zvishoma, ine zita rechinzvimbo chekutarisira uye vashandi vane mubairo wakajeka, wakanaka volkswagen uye gadheni rakagoverwa rakacheneswa.
Hana dzevashandi dzinopukutirwa kure nemubhadharo uye kugovera nyaya dzebasa kumapati nemapati kana kumuchina wekofi.
Grappemaker ine kuravira kwayo mushure meWiersum psyop
uye nezveDresden zvine hanya ... zvakanaka vakafungidzirwa kuti haugone kutiza
Imwe nguva nguva inonzi inodaidzwa dambudziko inoita kuti iwe uite nechisimba kwazviri nekudana kwekugadzirisa, kurwisa kana kupindira. Pashure pacho, kuwedzera kwakasimba uye kwakawanda mutemo kunouya. Idd kuwedzera kuchengetedza uye masimba kune mushandi wevechidiki wekuchengetedza. Ingozvivharira uite zvinotaurwa zvingave zvinoruramisa kana kuti kwete. Kuburikidza neunzenza uye husina humwari, vanhu vanomanikidzwa mukubata kwavo nemutengi. Iwe unoswededzwa pedyo nekurapwa senge miti kunge musungwa weAmerican max. Iwe uri chaizvo chinhu mune akadai mamiriro. Nzanga yakanaka, handiti? Haha hongu befehl ist befelh inoteverwa zvakanaka nesoftware, chero kutsauka kubva kwairi kunoonekwa sekusarudzika kwakanyanya. Kunze kwakangova "bhaa" mune yavo masisitimu. Kazhinji ivo havana vana ivo pachavo, asi ivo vanoda kuenda ne "vadiki" maererano nebhuku. Inoita kunge inoita sechigadzirwa here? Iwe unofanirwa kuichengeta "iyo" kune imwe nzvimbo yakakodzera zvisina kudaro kuchengetedzeka kwemhuri yako kunogona kunge kusisiri kuvimbiswa. Just like chaiye max musungwa. Haufi wakaziva hey?
Hei Martin uye zvakare thx yeruzivo. Ndatenda nekugovana ruzivo rwako, rwakakoshesa zvikuru. Dzimwe nguva ndinogovana zvinyorwa zvako. Asi vanhu vanofunga kuti ndinopenga. Kana kuti vanhu vanonetseka nezvezvimwe zvidzidzo Kana kuti unouya nemhando iya yezvakanyanya kuwandisa zvinhu. Izvo hazvina basa kuti yakakura sei njere, kusvikira imwe kureba kwekuziva dissonance ichitanga kutamba kana musoro unopinda mukati mejecha. Kana kuti vanokumukira. Ndakatopinda muhondo nezvazvo pandakataura nezvezvinyorwa izvi.
Usabate nyika yavo nema paws nekuti ipapo uchavabata, ivo vanokubhadhara. Unogona kubhadhara zvakare?
Seizvo vanhu vakasungirira muroyi, iwe unofanirwa kuita nemhando dzevanhu vanoshusha vechidiki.
Mhinduro yakanaka kubva kwauri. Zvakanaka, zvakaoma kutarisira jets kubva kune yakajairwa vagari nekuti vese vari kungotya. Ivo vanoisa izvo zvakanyanya sezvinobvira nekuenderera pamwe nekumanikidza kweboka zvakanyanya sezvinobvira uye vachitevera zvinhu zvakarongwa zvehurongwa.Vagari vanotaura pamusoro pezvakatarwa nehurumende. Iyo Netherlands, Madurodam, inogona kunge yakaipisisa kupfuura yaimbova GDR. Apa vanotamba zvakapusa. Vanokanganisika muNetherlands vakomana, vakabatikidzwa, vakanyarara kusvika parufu, nezvimwewo uye kana ukanetseka kune imwe nzvimbo iwe unowana tsaona yekunyepera, zvirokwazvo inotungamirirwa nevaya vanotsvedza vaunoziva. Nekuti magamba haasi kushanda mufuru. Nekuti chimiro chevakomana chinofanirwa kuchengetedzwa neese maitiro. Kudzoserwa kwenzvimbo iyoyo nehuwandu hwevanhu kunorambidzwa. Chinyorwa chinofanira kuteedzerwa.
Zvese izvozvo hazvichafanira kuve muchivande. Kana mutemo uchipfuura nomukamuri iro munhu wese, mhuri, shamwari kana vavakidzani vanogona kunzi munhu anogona kuvhiringidzika munhu, ipapo psycholance inongouya kuzokutora iwe usingapindire mutongi kana chiremba wepfungwa.
Kutenda kuna Thijs H. PsyOp, Ruinerwold PsyOp nevamwe vazhinji kubva gore rakapfuura.
Uku ndekwekuchenesa kwaunoita vanopokana uku vamwe vachigara zvakanaka sevashandi veGGZ (varindi vatsva).
Ehe, ichokwadi kuti isu tinogara mukunyarara, kudzvinyirira kusingaoneki. Shanduko yenguva nekukurumidza sezvinobvira ipapo huwandu hwevanhu vanogona pakupedzisira kugara mune yavo yemahara nyika kana ivo vasingachave nenzvimbo dzakakosha nzvimbo dzavanogara chaizvo kubva, kwenguva yakareba, yakareba.
« Iri gomba rakatorwa mifananidzo neNASA zvechokwadi iplasma plasmid
Idzva Martin Vrijland bhuku 'Icho chokwadi sezvatinozviona' chakagadzirira kutumirwa! »
Total Visits: 13.903.479